दलालको मा`ध्यमबाट बोलाएकी यौ´नक´र्मी युवती आफ्नै श्री`मती परेपछि… - Satya Samachar
मुख्य पृष्ठ /रोचक/दलालको मा`ध्यमबाट बोलाएकी यौ´नक´र्मी युवती आफ्नै श्री`मती परेपछि…
83,102 Less thanaminute
काठमाडौं। कहिलेकाहीँ श्रीमान–श्रीमतीको अगाडि यतो परिस्थिति आउँछ कि दुवैले केही गर्न सक्दैनन् । दुवैले एक अर्कालाई धोका दिएर बाहिर सम्बन्ध बनाएको अवस्थामा निकै संकट पर्न सक्छ । यस्तै एउटा घटना भारतको उत्तराखण्डको काशीपुरमा भएको छ । आज तकका अनुसार यहाँ एक व्यक्तिले कलगर्ल बोलाएका थिए । जब उनले बोलाएकी कलगर्ल उनको अगाडि पुगिन् युवतीको होसहवास उड्यो । ती कलगर्ल उनकै श्रीमती थिइन् ।
त्यसपछि श्रीमानले श्यामपुरमकी एक महिला दलालसँग ह्वाट्सएपमा सम्पर्क गरेर कलगर्ल पठाउन भने । दलालले केही फोटो बताएर युवती रोज्न भनिन् । युवकले आफ्नी श्रमितीको फोटो रोजे । महिला दलालको नम्बर उनलाई श्रीमतीकी साथीले नै दिएकी थिइन् । त्यसपछि जब कलगर्लको रुपमा उनकै श्रीमती उनको अगाडि आइन्, उनीहरुबीच ठूलो लडाइँ भयो । अहिले श्रीमतीले आफ्ना श्रीमानको आफ्नी साथीसँग सम्बन्ध भएको आरोप लगाउँदै उजुरी गरेकी छिन् भने श्रीमानले श्रीमतीको यौनधन्दाको विषयलाई लिएर उजुरी गरेका छन् ।
पूर्वयुवराज पारस नागाबाबासँग सडकपेटीमा !
एक भोटको दुर्भाग्य-लगाइसकेको माला फालियो, अबिर पुछियो !
केएमसी अस्पतालमा एक महिलाले जन्माइन् एकै पटक ४ बच्चा